Ikhitshi lwanamhlanje -Ifanitshala -ukukhuthaza
Udidi: Ikhitshi langoku
Amakhitshi anamhlanje ahluke kakhulu namhlanje. Mhlophe, mnyama, bomvu, ngomthi kunye nabanye abaninzi. Khetha nje ngokhetho lwakho. Ikhitshi yindawo apho kufuneka uzive ukhululekile. Ngokuthe ngcembe, umbono uyanyamalala wokuba yindawo nje yokupheka. Ikhitshi lanamhlanje liba yindawo apho usapho lonke luhlangana khona. Ikwayindawo apho iindwendwe zamkelekile. Kubalulekile ukuba nekhitshi yomoya yanamhlanje kunye nekhitshi elimnandi. Iikhikhini zala maxesha, unokuxhobisa ngezinto zokudlala ezinokuyenza le ndawo ibe mnandi. Ukuba ikhitshi lakho alinako ukukhanya kwendalo, musa ukoyika ukufikelela kukhanyiso olungelulo olwenziwe kwiishelufa kunye neekhabhathi ezizodwa. Baza kukhanyisa ikhitshi lakho kamnandi.
Iitafile zasekhitshini nezitulo
Ngomhla wama-29, 2020 NgoFebruwari 16, 2021 admin
Inxalenye ebalulekileyo yekhitshi yitafile enezitulo. Kuya kufuneka unonophele ngononophelo kule nto ibalaseleyo ukuze ilingane ngokugqibeleleyo ngaphakathi. Yeyiphi itafile ekulungeleyo? Zeziphi izitulo eziyiyunithi emarikeni? Siza kuzama ukukuphendula. Thenga yonke into ngokwahlukeneyo okanye njengeseti? Ngubani othanda ifanitshala efanayo? Yiza nobuncinane kunye noyilo ekhitshini lakho. […]
Ikhitshi elinesiqithi liphupha loomama abaninzi. Ukuba ubabuza ukuba bathini uluvo lwabo ngeyona cuisine imangalisayo, iya kuba yile iqulathe isiqithi. Iya kuzisa into ethile yobunewunewu kunye nomtsalane ekhitshini lakho. Icala elisezantsi kuphela kukuba ufuna ikhitshi elikhulu kwisiqithi. Zithini imilinganiselo yekhitshi? Ukuba ufuna ukufumana isiqithi ekhitshini, kufuneka ubene […]
Ayinguye wonke umntu onekhitshi elikhudlwana elinokubamba zonke izinto eziyimfuneko kwaye usenendawo eyongezelelweyo. Nokuba amakhitshi amancinci ahlukile kwaye siza kukunika izimvo ezimbalwa malunga nokuba nayo yonke into oyifunayo kuyo kunye nendlela yokugcina izitya nokunye okuninzi. Itafile encinci inomtsalane wayo Mangaphi amalungu ahlala kwikhaya lakho? Uhlala kangaphi etafileni? Okwangoku […]
1 2 ... 9 izithuba abadala